अनौठो समाचार Archives - Sagarmatha Online News Portal
रोम । इटलीको एक शहर ब्रिन्दिसीमा दोस्रो विश्वयुद्धको शक्तिशाली बम निस्क्रिय बनाउन ५० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ । शहरको दक्षिणी क्षेत्रबाट ५४ हजार मानिसलाई हटाएर उक्त ठाउँ खाली गरिएको हो । स्थानीय मिडियाका अनुसार उक्त बेलायती बम एक मिटर लामो र २ सय किलोग्रामको छ । जुन गत नोभेम्बर २ मा सिनेमाको काम गर्ने क्रममा भेटिएको हो । मानिसलाई खाली गर्ने काममा एक हजार भन्दा धेरै सुरक्षाफ...
बेलायती महारानीलाई विश्व घुम्न भिसा र पासपोर्ट चाहिँदैन !
काठमाडौं । पासपोर्ट विना विदेश जान पाइँदैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । आफ्नो मुलुकको पासपोर्ट र नियमानुसारको भिसा विनै विदेशी मान्छे समातियो भने जुनसुकै देशले कारवाही गर्दछन् । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश छ, जहाँकी महारानीसँगै आफ्नो देशको पासपोर्ट हुँदैन । तर ती महारानी अहिलेसम्म विश्वका १ सयभन्दा धेरै देशको यात्रा गरिसकेकी छिन् । हो, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया सायद विश्वकै एकमात्र...
काठमाडौं । चैतको अन्तिमतिर डडेल्धुराबाट धनगढी हुँदै अमरगढी २ आइतेबजारकी निर्मला थापामगर परिवारलाई खबर नगरी काठमाडौं आउँछिन् । काठमाडौं आएर होटलमा काम शुरु गर्छिन् । सम्पर्कविहीन भएपछि निर्मलालाई परिवारले खोज्न शुरु गर्छ । कतै नभेटिएपछि निर्मलाको परिवार काठमाडौं आउँछन् । काठमाडौं आएका निर्मलाको परिवारले प्रहरीमा उजुरी गर्छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसा...
जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि राजाले नै मालीको काम गरेपछि …!
एजेन्सी । विश्व मानव इतिहासमा पत्याउँनै नसकिने घटनाहरु धेरै हुन्छन्, र भैरहेका छन् । क्रुर पूर्व शासक गद्धाफी होस या किमजोङ उन ! यीनीहरुभन्दा कयौंगुणा क्रुर शासक हिटलरको कार्यशैली त झन पत्याउनै नसकिने प्रशस्त थिए । र विश्व मानव इतिहासमा यस्ता मानविय संवेदना भएका शासकहरु पनि प्रशस्तै छन् । जसले पत्याउनै नसकिने कामहरु गरेर आम जनताको सेवा गरिरहेका छन् । पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रमा पर्ने देश घानाको ...
प्रेमिकाले अन्तिम चुम्बन गर्दै प्रेमीको जिब्रो दुईटुक्रा पारेपछि …!
एजेन्सी । संसारमा हरेक दिन विभिन्न किसिमका अनौठो घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो मानविय होस वा प्राकृतिक । पछिल्लो समय पनि यस्तै अनौठो घटना भएको छ । भर्खरै स्पेनको बार्सिलोनामा एउटा पत्याउनै नसकिने घटना भएको छ । सुन्दा पनि आङनै सिरिङग हुने घटना भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । आडिया लोपेज इस्टिवे नामकी युवतीले दोश्रोपटक ब्रेकअप भएसँगै प्रेमीको जिब्रो चक्कुले च्वाट्टै काटिदिएकी छिन् । उनीहरुको ...
‘धर्तीमाता’लाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरी हवल्दार नै काप्न थालेपछि …!
काठमाडौं । आफूलाई धर्तीमाता बताउने गुल्मी घर भएर बुटवल बस्ने विष्णु कुँवरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गत साता भद्रकाली मन्दिरमा एक किशोरीमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट गरेकी कुँवरलाई शुक्रबार बिहान बालाजुबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । शुक्रबार कथित धर्तीमातालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर, भिडियोमा किशोरीमाथि कुटपिट हुँदा देखिएकी हवल्दार एकाएक काप्न थालिन् । भर्ख...